Kitapo herinaratra LED taratra China ho an'ny valindrihana, tontonana, mpanamboatra herinaratra Downlight, mpamatsy - ambongadiny - Shenzhen Dengfeng Power Supply Co., Ltd
48W Hatramin'ny kitapo fiovam-po 24w
Kitapo bateria havaozina hazavana tampoka 40W
Kitapom-pahefana maivana LED 90W
7w LED Inverter Emergency Kit
40w LED Inverter Emergency Kit
18w Light Moudle
LED 3w ~ 10w Kitapom-pahefana vonjy maika --DF168N
2.LED 8w ~ 25w Kitapom-pahefana vonjy maika - DF168H
3.LED 26w ~ 36w Voninkazo herinaratra maika »DF518H
5.LED 55w ~ 90w Packs herinaratra maikaâ € ”DF518H100
Kitapo herinaratra LED Max 40w - DF518S
Kitapo herinaratra LED Max 50wâ € ”DF268C
Kitapo herinaratra LED Max 100w "DF168-30H
Fitaovana herinaratra maharitra 8w-58w Fluorescentâ € ”DF338
Kitapo herinaratra LED Max 10Wâ € ”DF618H
Kitapo herinaratra LED LED Max 24Wâ € ”DF628H
Dengfeng Ltd dia orinasa tsy miankina noforonina tamin'ny taona 2009, manampahaizana manokana amin'ny famolavolana sy fanamboarana kitapo fiovampoana vonjy maika isan-karazany ao anatin'izany ny kitapo sy fitaovana LED feno. Ny orinasa dia mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny vokatra avy amin'ny mpanjifa OEM ary rehefa ilaina izany Manome mpiasa sy fitaovana hanatanterahana asa fanovana, ka hiantohana fa ny kitapo fiovam-po dia ampidirina tsara mifanaraka amin'ny fenitra eoropeanina, aostralia, amerika ary britanika mifanaraka amin'izany. mampiasa mpiasa eo an-toerana maherin'ny 100 izahay ary mirehareha amin'ny fahafaham-po mahomby amin'ny fandefasana azy. Ny ankamaroan'ny vokatray dia alefa amin'ny alàlan'ny fanaterana ny Andro Manaraka, mazàna ny kaomandy voaray alohan'ny mitataovovonana dia halefa amin'ny fandefasana ny ampitso, ny fotoana voatondro amin'ny vidiny fanampiny. Ireo modely namboarina sy / na fonosana bateria natolotra dia azo antoka tanteraka. Rehefa nifindra tany amin'ny ozinina mirefy 3300 metatra toradroa ankehitriny isika, ny mpanjifanay dia afaka mandray soa avy amin'ny fitomboan'ny fahaiza-manao sy ny fahombiazan'ity fampiasam-bola ity.
Miasa ny jiro vonjy maika LED
Ny jiro vonjy taitra LED dia tsy maintsy ampiarahana amin'ny fitaovana vonjy taitra-inverter (inverter). Inverter dia DC (bateria, bateria fitehirizana) ho lasa alternating ankehitriny (mazàna 220v50HZ sine na onja toradroa).
Tena ilaina ny fanavaozana an'i Shina
Ilaina tokoa ny fanavaozana ny fanavaozana ny indostria ao amin'ny renirano Pearl River, miavaka tokoa ny toekarem-pirenen'i Zhongshan. Tamin'ny 2007, ny famokarana indostrialy Zhongshan dia nitahiry mihoatra ny sandan'ny famokarana indostrialy an-tanàna 70%.
Vokatra LED jiro hiditra amin'ny tsenan'i Japon
Voalohany, fenitra fanamarinana jiro LED Japana Araka ny fanadihadiana natao tamin'ny Te, Japon dia tsy misy fenitra fiarovana sy mari-pahaizana momba ny jiro LED mazava. Ny fikambanan'ny mpamokatra jiro elektrika ao Japon dia nanomana fenitra indostrialy Japon (JIS) ho an'ny fiarovana ny jiro LED m......
Ny jiro vonjimaika dia nitondra ny vidin'ny 5oud Emergency Light Moudle
Kitapo fiovam-po vonjy maika ho an'ny kitapo fiovam-po LED 45w LED